Yakanakisa Nootropic Stack Chinongedzo: Zvese zvaunoda Kuti Uzive [Makore mashanu Zvakaitika]
Wakanga uchiziva here kuti iwe unogona kuve wakapusa pasina kupisa mwenje wehusiku uchidzidzira? Kana paine hupfu hwaigona kukubatsira kuvandudza ndangariro yako kana kuwedzera kuwedzera kwako, waizozvitora here?
nhasi, madhiragi akachenjera, inozivikanwawo seanotropics, vari kuva mudiwa kune vakawanda. Chikonzero cheichi ndechekuti ivo vanozivikanwa kuwedzera zuva rehupenyu hwezuva nezuva. Iyo nootropic mabhenefiti anotangira kubva kune yakareba nguva yekutarisisa, kuwedzera kusimbisa, kuwedzera kutarisisa pamwe nehuropi hwakangwarira.
Iwe uchaona kuti kune vadzidzi vasina kunaka kwazvo pakuyeuka uye vachazoda kuteedza bvunzo dzavo pasina kunetseka kukuru. Zvakare, kune vanhu vane mabasa akakwira-akakwira vane masiteki akakwira vangade kuchengetedza huwandu hwakanyanya zuva rese.
Pamusoro peizvozvo, vamwe vanhu vanoshandisa nootropics uye smart zvinodhaka poda kugadzirisa mota mashandiro kusagadzikana senge Alzheimer's, Hunnington chirwere, Parkinson, uye ADHD. Izvo ndezve zvikonzero zvakadaro zvekuti iwe ungafunge kushandisa nootropics kuti ugare pamberi pevamwe.
Muchikamu ichi, isu takatetepa pasi pegumi gumi neshanu nootropic powders uye chii chinoita kuti vabude kunze.
Kunzwisisa akasiyana mhando nootropics
Munguva yakapfuura, indasitiri yemishonga yakangwara yakura, neinowropropics yakawanda kuwanikwa kupfuura nakare kose. Heano mapoka matanhatu ayo nootropics inogona kuiswa mukati;
Idzi ndedzimwe dzevanoshandiswa zvinonzwisisika zvinowedzera izvo zvinotengeswa pamusoro pekambani. Izvo zvakanaka nezvavo inyaya yekuti ivo vanovandudza basa rekunzwisisa kwemunhu pasina kuita senge inomutsa kana kusimbisa. Kunyangwe masayendisiti asati anzwisisa mashandiro avo ekuita zvizere, zvinonzi zvinowedzera kweropa uye kunwa oksijeni zvimwe zvikamu zveuropi.
Neraki, ivo vanowanikwa nyore nyore sezvaunogona kuwana nyore nyore online. Zvakare, mashoma mashoma emakotsi emakonzeri ataurwa kusvika pari zvino.
Kazhinji, mizhinji yemishonga iri mukirasi ino inoshanda mushe kana ichishandiswa kwenguva yakareba. Izvi zvinoreva kuti kuti unakirwe nepamusoro mabhenefiti, iwe unofanirwa kuishandisa kwemavhiki akati wandei.
Chero nootropic inofungidzirwa kuva yemakwenzi, organic, kana yakasikwa ndeyekirasi ino. Kazhinji, ivo vanowanzodyarwa-based uye vanopa zvakasikwa mabhenefiti. Iyi kirasi yezvinodhaka inowanzo farirwa nekuti yakachengeteka kushandisa sezvo isina macomputer ekuumbwa kana makemikari.
Chimwe chezvikanganiso zvakanyanya ndechekuti havarongedze punch kana ichienzaniswa neye syntroduction nootropics. Mumwe anogona, saka, anoda kutora yakanyanya dosi kuti iwane iwo maitiro akafanana neayo akagadzirwa.
Vitamin B inobuda
Sezvo sezita rinoratidza, Vitamin B inobuda istootropics inotorwa kubva kuV Vitamini kuti ubvise mabhenefiti akanaka. Ivo vanokanganisa glutamate, choline, uye dopamine mwero muuropi, uye izvi zvinoita kuti zvive zvinobatsira mukurapa kwekusawoneka kwekuziva kusarudzika senge ADHD.
Pakupedzisira, izvi zvinobva kune izvo zvinoshandiswa mukurapa kwekupera simba uye kwepfungwa pamwe nekuvandudzwa kwekuchengeta ndangariro.
Iwe unogona kunge wakadzidza nezve peptides kare. Izvo zvinongoitika zvoga masikirwo masero molecule akagadzirwa amino acids uye ayo anopindirana nemubatanidzwa makemikari zvisungo. Kunyangwe zvisiri nyore kuwana, Noopept inowanikwa online uye muzvitoro. Peptides yakasimba uye yakaratidza kuvandudza kukurudzira, ndangariro, simba repfungwa, kugona kwekudzidza, uye kusvinura.
Choline inowanikwa nemusikirwo mumuviri, asi dzimwe nguva tinogona kunetseka nekushomeka kwayo. Nekuda kweizvozvo, izvi zvinotungamira mukudzikisira kwekugona kugona saka kudzikiswa kwehukwana hwehuropi. Kutora choline nootropics kunobatsira mukuwedzera kwehuropi kugadzirwa kweacetylcholine neurotransmitters.
Choline zvinowedzeredza zvinogona kutorwa vega kana pamwe chete neyemichero. Kana dzakabatanidzwa pamwechete, dzinotungamira mundangariro dzakawedzerwa, kugona kwekudzidza, uye kuvandudzwa kwesekuita kwekuita.
Iwo ampakines ndiwo mamwe eanonyanyaropoototics akaunzwa munguva pfupi yapfuura. Ivo vanoshanda kuburikidza nekukurudzira kweiyo glutamate receptors muuropi. Nekuda kweizvozvo, ivo vanotungamira kune yakawedzera mazinga e glutamate, ayo anozovandudza kudzidza uye ndangariro.
Yakanyanya zvachose nootropic poda: Best nootropic yekuvandudza ndangariro: Best nootropic yekumhanya chiitiko:
Purity≥98% Flmodafinil poda
Purity≥98% Pramiracetam Upfu
Purity≥98% Carphedon poda
Iyo inoshanda kwazvo kunyangwe pane yakaderera dosages.
Iwe uchanzwa maitiro ayo mukati memaminetsi makumi matatu mushure mokutora.
Inotungamira kune yakasimudzwa mazinga ekurangarira nekubatsira iyo yakareba-yekuumbwa kwekuumbwa
Izvo hazviite kuti mumwe atambure nemazhinji mhedzisiro. kureva, iyo euphoric maitiro
Iyo inokwenya mukati maawa mairi 1-2 ekuitora
Inopa yakakosha inosimbisa maitiro
Inokurumidza kunyudzwa mumuviri
Iwo mazinga epamusoro anosvika mukati meawa imwe yekushandisa kwayo.
Heano Heano Pamusoro 15 Nootropics Smart Drug Powder:
Yakanakisa yakazara nootropic poda-Flmodafinil poda
Yakanakisa nootropic yeyekuvandudza ndangariro-Pramiracetam
Yakanakisa nootropic yekumhanya chiitiko-Carphedon poda
Yakanakisa nootropic yekumuka- Adrafinil Powder
Yakanyanya kungwara kuwedzeredza- Fladrafinil (CRL-40,941) Powder
Kwakanakisa kuterera kukurudzira- Hydrafinil (9-Fluorenol) Powder
Yakanyanya kukurumidza-kuita nootropic- Noopept (GVS-111) Powder
Yakanakisa nootropic yeanopropection-Nefiracetam Powder
Kwakanyanya kwepfungwa kukurudzira- Aniracetam poda
Yakanakisa nootropic mukurapa kwechirwere cheAlzheimer's- J-147 Powder
Yakanakisa anti anti nootropic-Magnesium L-Threonate Powder
Yakanakisa nootropic mukusimudzira kwemwoyo basa- Nicotinamide Riboside Chloride powder
Best nootropic yechirwere cheshuga-Galantamine Hydrobromide poda
Best nootropic mukurwisa cervical cancer- Compound 7P poda
Yakanakisa glutathione enhancer - N-Acetyl-L-cysteine ​​ethyl ester powder
Enzanisa akanakisa 15 smart drug nootropic powders muna 2019
ZITA RATING ZVIMWE ZVINOGONA ZVINONZWA DOSAGE HALF-HUPENYU
Flmodafinil poda 5 Vashoma kwazvo 100-200mg pazuva 12-15 maawa
Pramiracetam powder 5 Vashoma kwazvo 600-1200mg pazuva 5-6 maawa
Carphedon powder 5 Vashomanana 200-750mg pazuva 3-5 maawa
Adrafinil powder 4.5 Vashomanana 600-900mg pazuva 12-15 maawa
Fladrafinil poda 5 Zvishoma kusvika pamhedzisiro 100-200mg pazuva 6-7 maawa
Hydrafinil poda 4.5 Vashomanana 50-150mg pazuva 6-8 maawa
Noopept popwder 5 Vashomanana 30-60mg pazuva 3-6 maawa
Nefiracetam poda 4.5 Vashoma kwazvo 600-900mg pa 3-5 maawa
Aniracetam poda 5 Vashomanana 1500mg 1-2.5 maawa
J-147 powder 5 Several 20-30mg 1.5-2.5 maawa
Magnesium L-Threonate upfu 5 Vashomanana 1500-2000mg 44 maawa
Nicotinamide Riboside Chloride powder 4.5 Vashoma kwazvo 1000-2000mg 5.3 maawa
Galantamine Hydrobromide poda 4 akawanda 4-8mg 7 maawa
7P poda 5 Vashomanana 5000mg 1-2 maawa
N-Acetyl-L-cysteine ​​ethyl ester poda 4.5 Vashomanana 5000mg 5.6 maawa
Yakanyanya kuwanda nootropic poda
1. Purity≥98% Flmodafinil (CRL-40,940) upfu 90280-13-0
Kune mumwe munhu ari kutsvaga yakanyatsobudirira nootropic pasina kupomhodza yakawandisa muhurongwa, ipapo Flmodafinil powder ndiyo chaiyo chibvumirano. Iyo mufaro kushandisa sezvo Flmodafinil dhesi inodiwa ndeye 100-200mg yakakamurwa kaviri zuva nezuva. Kubva pane yeFlododinin wongororo yakapihwa nevashandisi, zviri pachena kuti iyi nootropic ichaita kuti unzwe uye funga sahwira nekungotora chidiki chazvo.
Izvo zvakaratidza kuwedzera mumwe munhu wekuziva kugona uye kubereka nekuwedzera huwandu hwe histamine, orexin, glutamate, uye norepinephrine mazinga. Zvimwe kunze kweizvozvo zvinoshandawo nekudzivirira kuputsa kwe dopamine mumuviri.
Kunyangwe chiri chimwe chezvinyowani mumusika, ndiyo yakanakisa nootropics poda nekuda kwemabhenefiti ayo ayo anounza patafura. Chimwe chazvo ndiko kuwedzera kudzidza uye kugona kuyeuka mumwe.
Kechipiri, inobatsira mukurapa kwekushungurudzika kudiki kuburikidza nekudzoreredza kwemunhu kugara kwako kwemweya. Iyo inobatsira zvakare mukutarisira kweADHD uye mamwe mamiriro ane hukama-hwakanangana. Uyezve, Flmodafinil inozivikanwa kuti inowedzera kusimuka, kugadzirisa kukurudzira, uye kuisa pfungwa, uye kunyangwe kuita kwepamoyo kwepamoyo.
Kana uchifananidza Flmodafinil vs. modafinil, maitiro akati wandei anouya mukuverenga, semuenzaniso, mhedzisiro yeFlododinil mishoma vashoma kana vachienzaniswa neyeye modafinil. Kunyangwe ivo vachiratidzika sechinhu chimwe chete, chimiro chavo chakaumbwa chakatosiyana, uye izvi zvinoita kuti Flmodafinil ive bioavava.
Kana zviri zveFlododinil mugariro, zvinoenderana nenyika yauri kubva. Semuenzaniso, kuti iwe utenge Flmodafinil poda muCanada, haudi mishonga yekunyora, asi iwe unoida iwe kuti utenge Flmodafinil kuEurope.
Kana iwe uchinetseka kuti yekutenga kupi Flmodafinil poda, saka haufanirwe kutarisisa. Unogona kusarudza kutenga Flmodafinil pamhepo senge iri nyore uye iri nyore kusarudza. Isu tiri iyo chaiyo nootropic powders sosi uko iwe unogona kutenga CRL-40,940 Flmodafinil poda.
Inoshanda nekuchinja histamine, orexin, dopamine, glutamate, uye norepinephrine mazinga.
Mushonga unokurudzirwa ndeye 100-200mg pazuva.
Yakanakisa nootropic yekuvandudza ndangariro
Kunyangwe iwe uri mudzidzi ari kutarisa kuti vaite bvunzo dzekupedzisira kana mukuru anoda kuchengetedza yavo grey nyaya, ipapo pramiracetam ndeyako iwe. Iyo yakanakisa nootropic kana zvasvika pakuchengetedza yakasimba ndangariro. Pramiracetam ndeyemhuri yevahlanga asi yakasimba kakapetwa makumi matatu pane iyo racetams.
Pramiracetam powder inoshanda nekuwedzera mwero wekutora choline uye Nitric oxide kugadzirwa muuropi. Iyo mikuru Pramiracetam mabhenefiti anosanganisira; kuvandudza mukutarisa uye kupora kubva kune chero kukuvara kwehuropi. Inobatsirawo mukutendeuka uye kudzivirira amnesia.
Iyo Pramiracetam stack inowanzo iine choline sosi yekumisikidza yakaderedzwa acetylcholine mazinga muuropi uye nekuvandudza kugona kwekuziva. Inogona zvakare kuiswa mukati neAdrafinil, Armodafinil, uye Modafinil. Kuenzanisa Pramiracetam vs. Phenylpiracetam, zviri pachena kuti Pramiracetam haina kukonzera mhedzisiro senge kushatirwa, kuda kurutsa, uye kutemwa nemusoro senge kwekupedzisira.
Kana uchironga kutenga Pramiracetam mune yekutengesa kana yakawanda poda, ipapo iwe unogona kugara uchivimba nesu.
Iyo ine yekukurumidza kutanga kwekuita.
Inopa kukurudziro ye psycho pasina kutungamira kune hyperstimulation.
Nguva yekurapwa ipfupi.
Iyo yakanyorova-inosungunuka saka yakanyanya kutorwa pamwe chete nezvikafu.
Yakanakisa nootropic yemitambo yekuita
Carphedon inogadzirwa nepiracetam ine mutsauko wepanyama ne piracetam ndiyo phenyl boka rakanamatira pairi. Nekuda kweboka iri, iyo phenylpiracetam powder muyero inodiwa kuti ipe mhedzisiro yakafanana nePiracetam yakaderera uye inoonekwa seye 20-60 zvakapetwa zvine simba kupfuura Piracetam.
Mazhinji eiyo Phenylpiracetam ongororo inoratidzira nezve kushanda kwayo mukusimudzira mutambo wevatambi nekuda kwemhedzisiro yainopa. Inobatsirawo vanhu kuramba chando. Zvimwe zvakanakira zvinosanganisira kutungamira kwekufa pfari, sitiroko, kusagadzikana kwendangariro, uye kuneta.
Phenylpiracetam haifanirwe kutorwa panguva yekurara nekuti inogona kutungamira pakurara kwekuvhara. Zvakare, iwe unofanirwa kuitora kaviri kana mana pavhiki kana mumatenduru kuti udzivise muviri kuvaka kuvaka kusashivirira kune iyo inosimudzira maitiro.
Best nootropic yekumuka
Kana chinangwa chako chiri chekuwedzera kumuka uye kudzikisira kurara, saka unofanirwa kufunga kutora adrafinil powder. Kuwanda kweongororo yeAdrafinil kunoratidza kuti inobatsira pakubatsira munhu kuramba akamuka kwenguva yakareba. Panyaya yeAdrafinil Vs. Modafinil hafu yeupenyu, iyo yekupedzisira ine imwe yakareba. Adrafinil zvisinei inozoshandurwa kuita modafinil iri mumuviri ichiwedzera pahafu yayo yehupenyu nekudaro inogara-kwenguva mhedzisiro.
Zvimwe zveAdrafinil mhedzisiro inosanganisira kuwedzera kutarisisa; kunatsiridza kugona kwemunhu uye kutsigira ndangariro. Kunyangwe ichikonzera mhedzisiro mishoma, inoonekwa seyakachengeteka inosimudzira sezvo isingakonzere mhedzisiro isingafadzi mhedzisiro inosanganiswa nezvinokurudzira.
Inonyanya kutorwa nemvura kana muto wecitrus nekuda kweinovava Adrafinil upfu kuravira. Sezvo zviri pamutemo mune dzakawanda dzenyika, unogona kutenga adrafinil powder online pasina kudiwa kwemushonga.
Mushonga wakakurudzirwa ndewe mazana matanhatu-600mg.
The Adrafinil mhedzisiroyekupedzisira kwemaawa gumi nemaviri kusvika gumi nemaviri.
Izvo hazvifanirwe kutorwa zuva nezuva kana kwenguva yakareba sezvo ichivaka kushivirira.
Akanakira kungwara kunowedzera
5 Purity≥98% Fladrafinil (CRL-40,941) Poda 90212-80-9
Uri kutsvaga chimwe chinhu chingakubatsire iwe kukwira kuenda kune mikana inopfuura yawakamborota nezvayo? Fladrafinil poda ndiyo yakanakisa mushonga mukuwedzera kujekesa kwepfungwa uye kugona. Inoshanda nekudzivirira kuparara kwedopamine saka kudzora kwemanzwiro mhinduro, kudzidza, uye kutarisisa.
Fladrafinil yakafanana ne modafinil powder maererano nekuumbwa kwavo uye mhedzisiro neiyo chete mutsauko uri wekuwedzera fluoride morekuru. Iko kuwedzera kunoita kuti Fladrafinil ive nyore kupinza mumuviri.
Iyo Fladrafinil mhedzisiro mishoma, asi kuomarara kwavo kunogona kuwedzera nekugara kuchishandiswa. Neraki, inowanikwa nyore, uye unogona kutenga Fladrafinil online kana uchida.
The Fladrafinil muyeroinofanira kunge yakatenderedza 100-200 mg pazuva.
The Fladrafinil mativihazviwanzo kuitika.
Iyo ndeye 3-4 nguva yakawanda ine simba kupfuura Adrafinil uye Modafinil.
Kunakisa kuteerera kwekusimudzira
Hydrafinil powder, inozivikanwawo seFluorenol ndeye dopamine reuptake inhibitor ine simba rayo rekuwedzera kuterera. Zvimwe zveHydrafinil mabhenefiti anosanganisira kuwedzerwa simba repfungwa, kutarisisa zvirinani, uye kupera kuneta.
Iyo Hydrafinil mashandiro ekuita zvakare anosanganisira kuwedzera kweiyo histamine, norepinephrine, uye glutamate mazinga ekusimudzira munhu manzwiro. Kana tichienzanisa iyo Hydrafinil vs. modafinil bioavailability, Hydrafinil nootropic yakaratidza kuve nepfupi.
Kutengesa kwayo hakuna mutemo saka unogona kutenga mbishi Hydrafinil (9-Fluorenol) chero nguva yaunoda.
Iyo isingadhuri kana ichienzaniswa nemamwe ma nootropics.
Hydrafinil ishoma inomutsa saka mashoma maitiro akashata.
The Hydrafinil mhedzisirovanofungidzirwa kuve vakangwara.
Yakanyanya kukurumidza-kuita nootropic
Noopept powder inogadzirwa nootropic yakatorwa zvakanyanya sekuwedzera. Iyo ndiyo inokurumidza kuita smart smart sezvo iwe ungangodaro unzwe kushanda kwayo mukati memaminitsi. Kana iwe uchinetseka kuti Noopept inoshanda sei, ipapo ini ndichakuudza kuti sei. Maitiro ayo ekuita anosanganisira kuwedzera kwemaviri akakosha makemikari ehuropi; NGF uye BDNF.
Iyo Noopept mabhenefiti anosanganisira kuvandudzwa mundangariro dzemunhu, kujekesa, kumhanyisa kwekufunga, kutarisisa, positivity, uye kushingairira.
Iyo chete inozivikanwa yeNoopept parutivi mhedzisiro yemusoro iyo mhedzisiro yekutora yakakwira dosi kana kushandisa Noopept nootropic poda kekutanga. Kubatsira kwaNoopept ndechekuti zviri pamutemo uye zvinongotarisirwa mune dzinoverengeka nyika. Izvi zvinoreva kuti kana iwe uchida kutenga Noopept, unofanirwa kufunga nezvemitemo yenyika yako. Nekuita izvi, iwe unogona kutaura kana iwe uchida mushonga kana kwete.
The Noopept muyerois 30-60 mg pazuva.
Iyo inoshivirira zvakanyanya uye inouya neakanyanya mashoma mhedzisiro.
Iyo yakanyatso kubikwa ne choline.
Yakanakisa nootropic yeiyo neuroprotection
Mushure mekutambura nesitiroko, varwere vazhinji vanonzi vanonetseka, izvo zvinogona kutungamira mukukuvara kwehuropi pamwe nekukanganwa ndangariro. Neraki, Nefiracetam yakaratidza kudzivirira kubva pakubatwa. Inoita izvi nekudzora chiratidzo cheNMDA chinotadzisa kupokana nekukwira kwenzvimbo dze glutamate.
Iyo ndeimwe yenhengo nyowani dzenhengo dzeracetam, uye mamwe emamwe mabhenefiti ayo anosanganisira kukwidziridzwa kwemanzwiro, kudzidza, uye ndangariro. Kana tichienzanisa nefiracetam VS aniracetam, yakawanda nefiracetam ongororo inoshuma kuti inokonzeresa kuvandudzika kwemanzwiro emunhu.
Nefiracetam mhedzisiro mhedzisiro, saka inofungidzirwa kuve yakachengeteka uye inoregererwa-zvakanaka.
Mushonga wakakora mumafuta; saka, yakaderera dosages inowanzo kuve yakanyanya kushanda kana ichienzaniswa nepiracetam.
Nefiracetam yakaitisa mhuka zvidzidzo pamwe nezvimwe zvidzidzo zvevanhu.
Muripo ndeye 100mg-900mg pazuva, wotorwa kaviri; mumwe mangwanani, uye wechipiri mangwanani.
Yakanyanya pfungwa kurudziro
9 Kuchena≥98% Aniracetam hupfu 72432-10-1
Iyo smart poda aniracetam ndeye ampakine nootropic iyo ine simba kupfuura piracetam. Zvinotora menduru kana zvasvika pakuvandudza kwepfungwa uye zvinoshanda nekusimudzira ma AMPA receptors; yakajairika CNS glutamate receptor. AMPA receptors inoita basa rakakosha mukuumbwa kwezviyeuchidzo uye kudzidza.
Zvimwe zvinobatsira zveAniracetam poda zvinosanganisira kuwedzera kwekufungisisa, kudzikira kwekushushikana, uye kuwedzera mukuona. Iyo mhedzisiro mhedzisiro iyo inokonzereswa kana ichienzaniswa nepiracetam inoita kuti iwedzere kufarirwa kusataura nezve mhedzisiro yayo iyo yakasimba zvakanyanya kusimba kupfuura kapu yekofi.
Aniracetam poda inosimudzira kugona kwehunhu nekuwedzera iyo inotora neurotrophic factor, inoshanda senge fetereza yehuropi.
Iyo ine mafuta akawanda-anonyungudika.
The Aniracetam muyerois 1500mg rakakamurwa kaviri pazuva.
Mumwe anogona kunzwa Aniracetam mhedzisiroMaminitsi gumi nemashanu mushure mekutora.
Yakanakisa nootropic mukurapa kwechirwere cheAlzheimer's
10 Purity≥98% J-147 Poda 1146963-51-0
J147 poda ndeye nootropic yakagadziriswa muna 2011, uye iyo inogona kudzorera kurasikirwa kwekuyeuka, inononoka kana kudzoreredza chirwere cheAlzheimer's. Iyo ndeye phenyl hydroxide group uye inotorwa kubva kune chikamu che curcumin chinonhuwira.
J147 inoshanda nekuderedza iyo ATP synthesis chiitiko mune mitochondria. Kubudikidza neizvi, inodzivirira maseru e-neuronal kubva kune ane hukama nezera huro huturu. Tsvagiridzo iyi yakauya sekuferefeta kune vaongorori sezvo mazhinji emishonga yeAlzheimer yakanangana neamyloid plaque yakaiswa muhuropi hwevarwere veAlzheimer. Mishonga yeAlzheimers haina kubatsira zvakanyanya shure kwezvose.
Pakave nekupararira kweJ147 kiriniki miedzo, uye kusvika pari zvino yakaratidza kuve inoshanda uye ichifunga seyakagadzikana. Nemhedzisiro yeJ147 yekuyedza, zviri pachena kuti J147 inogona kubatsira pakurapa kwaParkinson uye sitiroko.
J147 inobatsira mukurapa kwezvirwere zvechirwere chechirwere.
Iri mushonga wekuyedza une anti-kukwegura zvinhu.
J147 inoshanda nekusunga kune protein inowanikwa mu mitochondria (masero anobatsira muchizvarwa chesimba).
Yakanakisa anti anti nootropic
11 Purity≥98% Magnesium L-Threonate Poda 778571-57-6
Wakambofunga here kuti kugona kwako kugona kugona kuramba kwakasimba kunyangwe nekukwegura? Magnesium L-Threonate powder yakasarudzika L-threonic acid magnesium munyu inozadza magnesium muuropi hwako, ichiita kuti ishande zvakanyanya. Iyo ndeimwe yemafomu emagetsi anowanikwa zvakanyanya pamusika.
Iyo Magnesium L-Threonate poda nootropic inoshanda nekuwedzera iyo synaptic density yakatenderedza hippocampus dunhu inowanikwa muuropi. Nekuita izvi, zvinokurudzira kureba, kupfupi, uye kushanda ndangariro mune vese vadiki nevakuru.
Izvo zvinowedzerawo imwe yemagnesium mumuviri pamwe nekugona kwavo kwekuziva.
Iyo yakanakisa Magnesium L-Threonate dosage ndeye 1500-2000mg
Inobatsira kuvandudza kuyeuka, kuderedzwa ndangariro nekuda kwekukwegura, uye zvakare kubatsira mukugadzirwa kwenzira itsva.
Magnesium L-Threonate yakatanga kusikwa nevaongorori kuMIT vaisanganisira mubairo weNobel Prize.
Yakanakisa nootropic mukusimudzira kwebasa remwoyo
12 Purity≥98% Nicotinamide Riboside Chloride poda 23111-00-4
Nicotinamide riboside Chloride powder ndiyo nyowani nicotinamide adenine dinucleotide mumusika, inova vhitamini anotungamira. Mukana nayo ndewekuti inoshandurwa nyore nyore kuita NAD + kamwe mumuviri uchienzaniswa nemamwe maNAD + anotungamira.
Nicotinamide riboside Chloride poda yakawanda inoderedza mukana wekutambura nechirwere chemwoyo zvakanyanya nekudzosera shanduko dzine chekuita nezera kune yako arteri. Nokusimudza iyo NAD + nhanho, pane kuderedzwa kwehuremu, kuomarara uko zvakare kunowedzera pane inochinja.
Mamwe maNicotinamide riboside Chloride mabhenefiti anosanganisira kubatsira mukudzikira uremu, kudzikisira njodzi yekenza, kubatsira pakurapa kwejet lag, uye kubatsira mukusimudzira kwehutano hwesimba kukwegura.
Iyo mhedzisiro haina kukosha, asi kuomarara kunogona kuwedzera nehupamusoro dosage.
Iyo inokwidza ropa NAD + mazinga kusvika kanosvika 2.7 times.
Iyo yakakodzera Nicotinamide riboside Chloride dosage iri 1000-2000mg pazuva.
Iyo yakachengeteka neine vashoma Nicotinamide riboside Chloride mhedzisiro yakave yakataurwa.
Best nootropic yekurapa chirwere cheshuga
13 Purity≥98% Galantamine Hydrobromide powder 69353-21-5
Nhasi, chirwere cheshuga ndechimwe chezviitiko zvinotungamira izvo vanhu vanotambura nazvo pasirese. Neraki, iyi nitrogen-iine komputa yakaratidza kubatsira kubata chirwere. Inoita izvi nekuvandudza iyo insulin yekuratidzira nzira. Galantamine Hydromide inoderedza zvakare kufutisa nekudzikisa kuzvimba, insulin kudzvinyirira, huremu hwemuviri, uye nemazinga echolesterol.
Munguva yakapfuura, yakashandiswa pakurapa kwekushaiwa simba kwemhasuru uye kunzwa kwepfungwa, uye kusashanda kwemotokari kwakaunzwa neyakaipisisa sisitimu yehuropi.
Mamwe mashandisiro eGalantamine Hydromide anosanganisira kuwedzera kweyekuziva mashandiro, kudzikisa marwadzo eArthritic, uye kugadzirisa zviratidzo muvana vevististic uye chirwere cheAlzheimer.
Inowanikwa kubva kumaruva uye mababu eCaucasian snowdrop, Daffodil, red spider lily, Garanthus woronowii, uye Voronov's snowdrop.
Galantamine Hydromide inonyatsomwa, iine mukanwa bioavailability ye90%.
Inobatsira mukutarisira kwezvirwere zvakashatisa seAlzheimer's nekuvandudza imwe yekurangarira, kuziva, uye kugona kuita mabasa ezuva nezuva.
Best nootropic mukurwisa cervical cancer
14 Purity≥98% Komputa 7P poda 1890208-58-8
Iyo mukomboni 7P upfu chena kuchena-chena hupfu iyo yakagadzirwa mune imwe mune akateedzana macomputer ane chinangwa chekuziva maviri-anoita thromboxane receptor antagonist inhibitors. Iyo nootropics yakakomberedza 7P poda inokurudzira kukura kwegap-43 yakanaka axon inotungamira mukusimudzira kweaxon kumutsidzirwa mu vivo.
Iyo yakaoma 7P yakaratidza chiitiko chepamusoro kwazvo mukurwisa cervical tumors nekuvandudza iyo microstosition nenzira yedhi-inotsamira.
Mamwe emabhenefiti e7P anosanganisira; kuwedzera kwekubatana, kurapwa kweanonwa-akanangana nedoro kukuvara, uye kudzivirira kwe oxidation kutenderera muuropi. Izvo zvinobatsirawo mukuvandudza manzwiro emunhu uye kurwisa kupera simba.
Iyo inosungunuka zvishoma mumvura uye ethanol.
Iyo yakadudzirwa 7P poda mwero unofanirwa kunge uine zvakapetana 5000mg.
Zvinotora imwe kusvika maawa maviri kukwira.
Yakanyanya glutathione enhancer
15 Purity≥98% N-Acetyl-L-cysteine ​​ethyl ester poda 59587-09-6
N-Acetyl-L-cysteine ​​ethyl ester (NACET) ndiyo ester fomu yeN-acetylcysteine ​​(NAC) iyo iyo esterification inobatsira kuwedzera kune lipophilicity yeNAC nokudaro ichivandudza pane yayo pharmacokinetics. Iyi ficha inowedzera kuwedzera kune yayo yepamusoro yekubata iyo painobatwa mukati memasero anotungamira mukushandurwa kwayo kuita cysteine ​​neNAC.
Iyo GSH preursor ine yakanyanya mukanwa bioavailability. NACET inoshanda nekutsiva NAC seye mucolytic mumiriri, seye GSH-inoenderana antioxidant, uye separacetamol antidote.
Huru inogadziriswa mumvura uye organic sol sol.
Inokurumidza kupinda mukati memasero mushure mekugadziriswa.
NACETinobatsira mukutarisira kwezvirwere zvinokanganisa kunge chirwere cheAlzheimer.
Chii chekufunga usati watenga nootropics
Kusarudza chaiyo nootropic kunoda kumbotsvaga, asi zvine kukosha nekuti kunokurongera iwe mhinduro dzauri kutsvaga. Hezvino zvimwe zvezvinhu zvekuisa mupfungwa uchitsvaga nootropic;
Kutora nootropic kamwe chete pazuva uye kukanganwa nezvazvo ndizvo izvo vanhu vazhinji vangasarudza kuenda. Asi mupfungwa chaiyo, kuwana yakanakisa nootropic inoshanda neyakafanana dosage nguva. Enda kune idzo dzinogona kutorwa kaviri kana katatu pazuva kuti muviri wako ushandiswe kune mushonga wakasarudzika urongwa zuva rese uchienzaniswa nekuve mumwe mushonga wekuvhundutsa.
Iwe haudi kutenga nootropics iri kupfuura bhajeti yako. Iwe, zvakadaro, unofanirwa kufunga kuti ese akasiyana uye nzira dzekugadzira dzakafanana saka mutengo. Iwe zvakare hautarisire kutenga yakakwira dosages ye nootropics ine zvemhando zvinonhuwira pamutengo wepuru. Saka usati wagadzirisa pane yakachipa, ita shuwa kuti itoita basa rakanaka here. Izvo hazvireve, zvisinei, zvinoreva kuti iwe unodarika yako nootropics; enda kune chinokodzera muhomwe yako.
Yese nootropic ine zvazvinoita. Kana iwe uchida imwe inogona kuwedzera kutarisa kwako, kune imwe yeiyo. Kune rumwe rutivi, kana iwe uine chinangwa chekudzora chirwere cheAlzheimer's, saka iwe unofanirwa kutsvaga iyo yakanakisa yeiyo.
Zvakare, zvimwe zvinogona kukonzera mhedzisiro yakakura zvichienzaniswa nevamwe. Hapana munhu anoda kuita zvakanaka chaizvo kuchikoro kungopedzisira ave nekukundikana kwechiropa. Mushure mezvose, hutano hwako hunotanga kutanga, uye haungade kutora chimwe chinhu chinogona kukuvadza iwe.
Dzimwe nguva, mumwe angade kusanganisa maviri kana anopfuura ma nootropics kuti awane maitiro ekuziva akanaka. Iwe, zvisinei, iwe unofanirwa kucherechedza kuti kwete ese ma nootropics akachengeteka kana akaiswa. Izvo zvakawanda sehomwe dzinozivikanwa kuwedzera potency uye kuderedza mhedzisiro, mamwe anogona kunge asina kuchengetedzeka kwauri. Iwe, saka, iwe unofanirwa kuziva izvo zvikamu zvega uye nzira yavanopindirana vasati vatenga ivo yekumurongedza.
Chinhu chimwezve chaunofanira kutarisa kune huwandu hwekutsvagisa kunoitwa pane nootropic. Vamwe vanoshaya kutsigirwa kwekutsvagisa vamwe vangasaedzwa pane vanhu. Munguva ino, kune akawanda smart madhiragi ayo kutsvakwa kwaitwa zvinogutsa.
Saka zvichangove zvakachengeteka kwauri kuti usarudze chigadzirwa chakanogadzirwa zvakavanzika uye chakasimbiswa kuve chinoshanda. Kubudikidza neizvi, iwe unovimbiswa nerunyararo rwepfungwa pamwe nekudzivisa kutambisa mari nekutora zvinhu zvingakukuvadza kana kusatomboshanda.
Mazhinji akataurwa pamusoro pechose chigadzirwa neavo vaakamboishandisa kare. Ruzivo rwakadaro runofanira kukubatsira kuti ugare pane zvakanakisa uye kuderedza mukana wekutenga nootropic isingashande. Enda kune avo vane zvakanakisa ongororo uye mashoma asina kunaka.
Kazhinji, pane zvakawanda zvekufunga usati washandisa mari yako pane chero nootropic. Kuti uwane zvakanakisa, iwe unofanirwa kukonzera pane zvese zvakapihwa pfungwa kuti zvigadzirise iyo yakawanda yakawanda yeezvikonzero kana zvisiri zvese.
Zvakanakira kushandisa nootropics
Mazuva ese, isu tiri kutsvaga mutsetse; chimwe chinhu chichaita kutipfuura vamwe. Wakafunga here kunze kwebhokisi uye ukafunga nezve kushandiswa kweanotropics ndiyo imwe yenzira dzinogona kupa hupenyu hwako kutendeuka?
Iko kushandiswa kwe nootropics kunouya nehuwandu hwekubatsira, uye kana iwe ukasatarisa mhedzisiro yakakosha nekushandiswa kweimwe nootropic, unogona kusanganisa maviri kana anopfuura kuti uone zvimwe zvinoshamisa mhedzisiro.
Pazasi ndedzimwe dzeanotropic mabhenefiti;
Wedzera yako pfungwa
Wakambozviwana iwe uchifunga nezve chimwe chinhu here zvekuti wakambokanganwa iro basa rave pedyo? Zvakajairika, asi dzimwe nguva unogona kunzwa sekunge uri kuwana dambudziko rekutarisa chinhu chimwe chete panguva iyoyo uine bundu remabasa asina kupera uye nepakati-yakabikwa mazano. Saka unoita sei?
Kutora nootropics kwakaratidza kubatsira kune izvozvo nekukubatsira iwe kuisa pfungwa zvakanyanya uye kwenguva yakawedzerwa nguva. Pashure pacho, iwe unogona kupa basa rega rega kutaridzika kwarinokodzera kunyangwe painenge ichinzwa senge uine zvakawandisa mupfungwa dzako.
Zvichida iwe wakaverenga imwe nyaya, wakazvinzwisisa chaizvo asi ukakanganwa zvese nyangwe zuva rebvunzo risati rasvika. Izvo hazvifanirwe kukukonzera dambudziko zvakare; kutora nootropics kwakaratidza kuve kunobatsira kune ndangariro dzevanhu.
Iyo inovandudza kuyeukwa kwemunhu kuburikidza nekuwedzerwa uye kugadzirisa kwezvikamu zvese zvekuyeuka kwemunhu uye zvakare kuyeuka. Nootropics inotsigirawo uropi hwekuvandudzwa kwemasero uye inowedzera kubatana kweiyo mitsipa. Kuburikidza neiyo yakagadziridzwa yekubatanidza, kunzwisisa, uye kuyeuka kwemashoko edatha kunosimbiswa.
Kuvandudza hwako hutano hwehuropi hwese
Uropi ndechimwe chezvinhu zvakakosha mumuviri. Kuita kwayo, zvisinei, kunokanganiswa nehurombo hwekudya uye hwakawanda masheti. Nekushandiswa kwema nootropics, haungogadzirisa memory yako, asi hutano hweuropi hwese hunovandudzwawo.
Izvo zvinowanikwa kuburikidza nekuwedzera kweiyo okisijeni kurukova kuenda kuhuropi uye nekuchengetedza mitsipa nemukati memaseru, izvo zvinoita kuti brainwaves ikwanise kushanda.
Edza mafungiro ako
Mhepo yakasviba inogona kukanganisa zuva rako uye kuita kuti usaite zviitwa zvako sezvavanofanira kuita. Neraki, pane zvigadzirwa zviripo zvinogona kugadzirisa mameseji ako, zvichikuita iwe munhu unonyanya kufara. Nootropics inogona kuendesa izvi ichiita kuti iwe utarise uye kuisa pfungwa dzako zvakanyanya pane izvo mabasa iwe aungave uchive uine.
Wood S, Sage JR, Anagnostaras SG (2014). "Psychostimulants uye cognition: Pharmacol. Zvak. 66 (1): 193-221.
Frati P, Kyriakou C, Marinelli E, Vergallo GM, Zaami S, Busardò FP (2015). "Smart mishonga yekuziva uye yekuvandudza muviri. Curr Neuropharmacol. 13 (1): 5–11.
Giurgea, Corneliu, (JanuarY, 1977). "Nootropic zvinodhaka". Kufambira mberi muNeuro-Psychopharmacology. 1: 235-247
1.Kunzwisisa dzakasiyana mhando nootropics
2.Enzanisa akanakisa 15 akangwara zvinodhaka nootropic powders mu2019
3.Best yakazara nootropic poda
4.Best nootropic yekuvandudza ndangariro
5.Best nootropic yemitambo yekuita
6.Best nootropic yekumuka
7.Best njere enhancer
8.Best kunyatsoteerera anosimudzira
9.Best yekukurumidza-kuita nootropic
10.Best nootropic yeuroprotrotection
12.Yakanakisa nootropic pakurapa kweAlzheimer's chirwere
13.Kurwisa kurwisa nootropic
14.Best nootropic mukusimudzira kwemoyo basa
15.Best nootropic yekurapa chirwere cheshuga
16.Best nootropic mukurwisa gomarara remuromo wechibereko
17.Best glutathione enhancer
18.Zvaunofanira kufunga usati watenga nootropics
19. Kubatsira kwekushandisa nootropics
Oleoylethanolamide (OEA): Kurera Kurera Mushonga Unobatsira Kudzora Chido.
Ko Palmitoylethanolamide (PEA) Tine Uremu hwekuregedza Kubatsirwa?
Iyo Yakanyanya Dehydroepiandrosterone (DHEA) Supplements